Mashandiro ematare mu’lockdown’ | Kwayedza
Mashandiro ematare mu’lockdown’
09 Jan, 2021 - 15:01	 2021-01-09T15:33:11+00:00 2021-01-09T15:32:00+00:00 0 Views
HOFISI huru yezvemitemo yaChief Justice Luke Malaba – iyo inova kuchikamu cheJudicial Service Commission – inozivisa veruzhinji mafambisirwo achaitwa nyaya kumatare edzimhosva munguva ino apo nyika iri kurwisa chirwere cheCovid-19 pasi pedanho reLevel Four Lockdown.
Mugwaro akatumirwa naMuzvare Rumbidzai Takawira, uyo anova Head of Communications and Corporate Affairs kuJudicial Service Commission of Zimbabwe, anoti sanduko iyi ichava kumatare ose edzimhosva kusanganisira Constitutional Court, Supreme Court, High Court, Labour Court, Administrative Court neMagistrate Court.
“Zvichifambirana nechikamu chemutemo weSection 2 (m) of the Public Health (Covid-19 Prevention, Containment and Treatment) (National Lockdown) (No. 2) Order 2020 Statutory Instrument 200 of 2020, matare edzimhosva akakosha nekudaro acharamba akavhura asi achashanda nenzira yekuti haazobatsiri mukupararira kwechirwere cheCovid-19. Nekudaro matare edu edzimhosva achange achishanda nevanhu vashoma,” vanodaro Chief Justice Malaba.
Vanoti pasi pemutemo weLevel 1V National Lockdown uri maringe nekuchengetedza utano hweveruzhinji – Public Health (Covid-19 Prevention, Containment and Treatment) (National Lockdown) No.2) Amendment) Order 2012 (No.9) – matare edzimhosva achashanda nenzira inoita kuti chirwere cheCovid-19 chisapararire zviri nyore achipindwa nevanhu vashoma zvinoreva kuti kufambiswa kwenyaya kuchange kwakaderera.
Vanoenderera mberi nekuzivisa mashandiro achaita matare edzimhosva.
“Kutanga musi wa5 Ndira, kuunzwa kwenyaya itsva uye kufambiswa kwadzo kana kunyorwa kwemagwaro evari kubvuma mhosva kuchambomiswa kusvika mazuva 30 adarika kureva kuti kusvika nemusi wa3 Kukadzi kunze kwekuti kana nguva yakatarwa ichinge yazokamurwa kana kubviswa. Nyaya shoma dzichatariswa nematare edzimhosva dzinosanganisira vari kuendeswa kuchitokisi (initial remand) vachipihwa mamwe mazuva ekutongwa kwemhosva dzavo, nyaya dzinoda kukurumidza kutongwa nevanenge vachinyorera magwaro ezvichemo kana bhero,” vanodaro.
Chief Justice Malaba vanoti nyaya dzichatariswa pakati pesvondo kubva na8 mangwanani kusvika na3 masikati. Vose vanenge vachisvika pamatare edzimhosva vanosungirwa kutevedza mitemo yeLockdown kusanganisira kutariswa kudziya kwemuviri, kugezeswa maoko nesanitizer, kupfeka mamasiki, kuregedza kubatana kana kuungana.
Vose vachange vasiri kuda kutevedza mitemo yeLockdown vachasungwa kana kudzingwa kumatare edzimhosva.
Vamwe veruzhinji vanongodawo kupinda vachiterera nyaya mumatare edzimhosva vachange vasingatenderwe panguva ino.
“Vapari vemhosva avo vanenge vachifanirwa kunge vachipinda mumatare asiri munzvimbo kana matunhu avanogara vanofanira kupihwa magwaro ekufambisa kumapurisa ari pedyo navo. Nyaya dzekuCivil Court dzichatanga kutongwa pazuva rekutanga rekupera kwechirongwa cheLockdown uye hakuna miripo inobviswa maringe nekunonoka kutongwa kwenyaya uye vamhan’ari nevamhan’arirwi vachaziviswa nezvemazuva matsva anezenge achitongwa mhosva dzavo,” vanodaro.
Masamanisi ose ainge akatumirwa vasungwa nevafakazi kuti vaende kumatare pakati pa5 Ndira na3 Kukadzi akakanzurwa nekuda kwechirongwa cheLockdown nekudaro anofanira kuzotumirwa zvekare panguva inopera chirongwa ichi.
“Zvekare vapari vemhosva avo vakanga vachifanira kuita mabasa ekufondoka pakuripira mhosva dzavo asi mizinda iyo yavaifanira kuitira mabasa aya yakavharwa nekuda kweLockdown, vanozotanga patsva panopera chirongwa cheLockdown,” vanodaro Chief Justice Malaba.